राष्ट्रपतिले समेत सेना परिचालन गरेर भए पनि स्थानीय चुनाव गराउने सरकारको इच्छा र देशको आवश्यकतामा सहमति जनाएपछि मधेसवादी दलहरु मध्येको एक प्रभावशाली घक संघीय समाजवादी फोरम नेपालले एक विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरेर यस्तो कार्यप्रति आपत्ति जनाएको छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘चुनावमा सेना परिचालन गरिदा सेनाको प्रतिष्ठासमेत खस्किने’ भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । वक्तव्यमा ‘नेपाली सेनाजस्तो व्यवसायिक संगठनलाई चुनाव सुरक्षाका नाममा देशको आन्तरिक मामिलामा परिचालन गर्दा सेनाको गरिमा, प्रतिष्ठा र वर्षौंदेखि कायम रहिआएको व्यवसायिकतामाथि आँच पुग्नसक्ने भएकाले सेनाको भूमिकालाई विवादित हुन नदिन स्थानीय तहको निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै चुनावमा सेना परिचालनको निर्णय तत्त्काल फिर्ता लिन संघीय समाजवादी फोरम नेपालले सरकारसँग जोडदार माँग गरेको छ । त्यसो त हरेक चुनावमा सेनालाई सतर्क गराउने हो, तैनाथ गराउने हो वा परिचालन नै गराउने हो ? त्यसमा सदैव विवाद रहदै आएको छ ।
जहिले पनि बाहिरी घेराको सुरक्षामात्र सेनालाई भन्ने नाममा सरकारले सेनालाई परिचालन गर्दै आएको छ । एकथरि जाफिकारहरु भन्छन्– नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संख्या कम छ, त्यसकारण नेपाली सेनालाई जुनसुकै शिर्षकमा पनि मैदानमा उतार्नु सरकारको बाध्यता हुनजान्छ । फेरि सेनाको उपस्थितिले मात्र पनि शान्तिसुव्यवस्था मिलाउन सरकारलाई धेरै सहयोग पुग्नजान्छ । खासगरी विवाद हुने स्थानहरुमा सेना देखिएमा मात्र पनि माहौल नै फरक हुनजान्छ । झडप, हुलदङको स्थिति आउँदैन ।
अर्काथरिको विचारमा असामान्य अवस्थामा बाहेक अरु बेलामा चाहे चुनाव कै समयमा किन नहोस्, झ्वासझ्वास्ती सेनालाई उतार्नु हुन्न । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र म्यादी प्रहरीबाटै काम चलाउनु पर्छ । सेनालाई सामानय अवस्थाको चुनावमा पनि परिचालन गर्दा सन्देश राम्रो जाँदैन । कुरो यो पनि सही नै हो ।
तर, अहिले तराई मधेसमा स्थिति सामान्य नरहेको र मधेसवादी दल पनि ढुलमुले चरित्रका साथ सरकारसँग टेढिएको हुनाले सरकारले सेना परिचालन गर्ने निर्णय गराएको हुनसक्छ । फेरि विप्लव लगायतका बहिष्कारवादी दलहरुको कडा चेतावनीले पनि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र म्यादी प्रहरीको मात्र भर पर्न नसकिने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हुनुपर्छ । त्यसो त, सेनाका प्रधान सेनापति महारथि राजेन्द्र क्षेत्री अहिले आफ्नो रुटिन भ्रमणकै सिलसिलामा मधेस भ्रमण गरिरहेका छन् । केही दिनअघि अनिल झा नेतृत्वको सद्भावना पार्टीको रुख जान्न कार्यक्रममा सैनिक रणनीतिअनुसारउपस्थित भएर हल्का विवादमा तानिएका प्रधानसेनापतिले मकवानपुर, काभ्रे र पर्सामा रहेका गणहरुको एकदिन निरीक्षण गरिसकेका छन् । यसअघि धनुषा, सर्लाही, सप्तरीजस्ता जिल्लाहरुमा पनि प्रधानसेनापतिको भ्रमण भइसकेको हो । यसबाट नेपाली सेना शान्तिव्यवस्थाका लागि तैयार छ भन्ने सन्देश दिन्छ ।
नेपाली सेना, जो राजनीतिकरण भएको छैन, व्यवसायिक छ र राजनीतिक चस्काबाट पनि टाढा छ । निष्पक्ष रहेको नेपाली सेनाले विवादित गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता कार्यान्वयन गर्ने निर्वाचनको पक्षपोषण गर्नु अलि सुहाउँदैन कि ? यद्यपि संविधानअनुसार चल्ने सेना आदेशको पालना नगरी रहन पनि सक्दैन । स्पष्ट छ, जनताको अपेक्षाअनुसारका परिवर्तन नभएकोले र संविधानलाई जनताले अपनत्व ग्रहण गरिनसकेकाले पनि सेना आदेश पालना गर्ने वा नगर्ने द्विविधामा परेको हुनसक्छ तथापि राजनीतिक दलहरुले जतिसुकै ठगी खाने बाटो बनाएको भए पनि संवैधानिक तरिकाले सेना परिचालन हुन बाध्य छ । प्रश्न यत्ति हो, सेना सतर्क चाहिं हुनैपर्छ ।